Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Facebook Page Admin များအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု ? ♫
♪ Facebook Page Admin များအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု ? ♫
သင့်ရဲ့ Facebook Page မှာနေ့စဉ် Customers များစွာက Messages များပေးပို့ပြီးသင့်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု၊ ထုတ်ကုန်များအကြောင်းမေးမြန်းစုံစမ်းတယ်ဆိုပါစို့။ ဖောက်သည်တစ်ယောက် မေးမြန်းထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ကမဖြေကြားနိုင်သေးရင်တောင်မှတ်စုတိုအဖြစ် အကျဉ်းချုပ် မှတ်သားထားနိုင်ရင် အချိန်ကုန် သက်သာစေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ထားရင်နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီ Conversation တစ်ခုလုံးမှ ဖောက်သည်နဲ့ သင် ပြောထားတဲ့ Messages များစွာကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။မှတ်စုတိုအကျဉ်းချုပ်ကိုသာဖတ်ရှုပြီးဖောက်သည်ရဲ့ ပြဿနာကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။Conversation တစ်ခုအတွက် မှတ်စုများမှတ်သားနိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကို Facebook က ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဒီစွမ်းဆောင်ချက်ဟာ Page Admin တစ်ယောက်ထက်ပိုရှိတဲ့ Page များအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ သင် မသိတဲ့ အကြောင်းအရာကိုမှတ်စုမှတ်သားထားပါ။ အခြား Admin တစ်ယောက်ကအဲဒီ Conversation ကိုအစအဆုံးဖတ်စရာမလိုဘဲမှတ်စုကိုသာဖတ်ပြီး ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာစေပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Facebook Page ကိုသွားပါ။ Messages Tab ကို နှိပ်ပါ။
မှတ်စုမှတ်သားချင်တဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ Conversation တစ်ခုကိုရွေးပါ။ ညာဘက်ခြမ်းမှ Add Notes ကို နှိပ်ပါ။
Add New Note Window ပေါ်လာရင် မှတ်စုကိုရေးသားပါ။ Confirm ကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် အဲဒီ Conversation ရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေမှာအကျဉ်းချုပ် မှတ်စုတိုကို မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ။ မှတ်စုနဲ့ အတူမှတ်သားထားတဲ့ Admin အမည်ကိုလည်း ပြသပေးထားပါတယ်။ မှတ်စုကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အခြား Page Admin က ဖြစ်စေ Conversationတစ်ခုလုံးကို ပြန်ဖတ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
Conversation တစ်ခုမှာမှတ်စုများစွာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည် မေးမြန်းတာကိုဖြေပြီးရင် Delete ကို နှိပ်ပြီးမှတ်စုကိုဖျက်နိုင်ပါတယ်။